Jụọ mpaghara: Ebee ka ụlọ ahịa kọfị kacha mma Kildare dị - IntoKildare
Ihe Zoro Ezo, Oge mbu, Nri na Ṅụọ, Atụmatụ Obodo
Ị chọrọ juputara caffeine iji mee ka ị na -aga ụbọchị siri ike n'oche? Ma ọ bụ ikekwe ịkwesịrị iweli ụkwụ gị elu ka ọ gbazee mgbe ị gachara nnukwu ahịa ụbọchị na Kildare…
Ihe ọ bụla kpatara ya, nweta onwe gị nnukwu iko kọfị n'otu ụlọ ahịa kọfị kacha mma na mpaghara, ndị na -agụ IntoKildare.ie chịkọtara.
Ụlọ Burtown & Ubi, Athy
Biputere nke Green Barn @ Burtown House (@burtown_house)
Green Barn bụ ebe kachasị mma iji nweta kọfị. Mgbe ị nọ n'ebe ahụ, gịnị ma ị ga-agagharị n'ogige ndị mara mma nke Burtown House ma ọ bụ ikekwe lelee menu brunch a na-apụghị imeri emeri.
Biputere FIRECASTLE (@firecastle_kildare) kesara
Firecastle na Kildare na-enye nhọrọ kọfị na-atọ ụtọ site n'ụtụtụ ruo mgbede. Pastries, scones na achịcha bụ naanị obere nhọrọ nke menu mara mma, yana ihe brunch mara mma dịkwa.
Swans na Green
Otu post Robert Mehigan (@r_mehigan) kesara
Swans na Green nwere ọmarịcha ikuku ahịa na-ekwo ekwo, nwere ezigbo nhọrọ nke mkpụrụ osisi na veg, na nri nri ehihie na ebe a na-ere nri. Ọ bụ n'ezie ọkacha mmasị obodo maka brunch.
Biputere ụlọ akwụkwọ nri nri Kalbarri kesara (@kalbarricookeryschool)
Schoollọ akwụkwọ nri Kalbarri bụ ụbọchị kọfị izu ụka zuru oke dị na Kilcullen. Ụlọ ahịa achịcha ha na-emepe kwa Satọdee site na 9am-2pm nke na-enye gị nnukwu ihe ngọpụ iji nwalee ọgwụgwọ ụtọ ha niile dị ịtụnanya!
Biputere nke Silken Thomas (@silkenthomaskildare)
Silken Thomas bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị na etiti Kildare Town nke nwere ọmarịcha nhọrọ tii na kọfị ịhọrọ na ya. Site na nhọrọ nke nhọrọ nri ụtụtụ dị ụtọ ma dị ụtọ, a ga-emebi gị maka nhọrọ!
Cafe Market Cafe
Mbipụta nke Shoda Market Café (@shodacafe)
Shoda Café bụ kọfị ndụ ọhụrụ Kildare, dabere na echiche ọhụrụ na ahụike. Mmadụ abụọ gụsịrị akwụkwọ na Shannon College of Hotel Management ezukọtala site na iji ahụmịhe ha nwetara site n'ịrụ ọrụ gburugburu ụwa site na ile ọbịa iji guzobe Shoda Market Café.
Ihe Zoro EzoOge mbuNri na ṄụọAtụmatụ Obodo
Oge okpomọkụ BBQ dị mkpa na Kildare
Iri oriri enyi na enyi na ezinụlọ na Kildare
Okporo ụzọ zoro ezo nke Kildare ga -enyocha
ekeresimesi mara mma na-aga na Kildare zuru oke maka ezumike ezumike
Burgers kacha mma ka ị nwee ọ enjoyụ na Kildare
Ihe iri kacha mma ime gburugburu Newbridge
Ihe iri kacha mma ime gburugburu obodo Kildare
Ihe iri kacha mma ime gburugburu Clane
Ezigbo ihe ị ga-eme gburugburu Leixlip
Ezigbo ihe ị ga-eme gburugburu Celbridge